Azo atao ve ny mahazo rohy amin'ny Twitter?
Ny fampivoarana ny orinasanao amin'ny aterineto dia ny antsasaky ny ady. Aorian'izany, mila mamorona ny habaka hitadiavana fikarohana ianao ary mazava ho azy ny mpanjifa mety aminao. Soa ihany, ny fanatsarana ny fikarohana dia miasa ho amin'izany tanjona izany. Ny ankabeazan'ny backlinks dia afaka manampy anao hanatsara ny fahatsapanao ny marika ary hahasarika ny fitohanan'ny fifamoivoizana amin'ny pejy web-nao. Ho tonga amin'ny valin'ny TOP ianao ao amin'ny Google, ankoatra ireo zavatra hafa mila ody be dia be avy amin'ny tranonkalan'ny PR, toa an'i Google+, Facebook, Twitter, ary hafa. Ny mari-pamantarana avy amin'ny vohikala avo lenta tahaka izany dia mampiseho an'i Google fa malaza ny tranonkala. Twitter dia sehatra sosialy malaza, mendri-piderana ary sehatra sosialy PageRank izay afaka manome ny tranokalanao amin'ny siramamy fifandraisana tsara be. Eto ianao dia afaka mamorona rindranoka avo lenta maro nefa tsy mandoa vola. Ny zavatra rehetra ilainao dia ny manangona bitsika manintona, mampidira rohy mankany amin'ny sehatra misy anao, ary raha azo atao ny tenifototra maromaro manan-danja.
Hodinihinay ato amin'ity lahatsoratra ity ny antsipirian'ny fomba hahazoana rohy mankany amin'ny tranokalanao ao amin'ny Twitter. Antenaina, ity fampahalalana ity dia hanampy anao hanatsara ny fikajiana ny tranonkalanao ary hahasarika mpanjifa maro hafa.
Ahoana ny fampiasana ny pejinao Twitter ho an'ny rohy?
Twitter dia sehatra ara-tsosialy malaza izay mamela ny famerenana rindran-damina amin'ny alalan'izany. Manome toerana roa ao amin'ny mombamomba anao izy mba hampidirana rohy amin'ny tranonkala. Ny voalohany dia ny sehatra momba ny sehatra voalohany, ary ny faharoa dia ao anatin'ny fizarana 160 ao amin'ny fizarana Bio. Ankoatra izany, afaka mahazo rohy mankany amin'ireo tranonkala izay misintona ny angona avy amin'ny profiles ao amin'ny Twitter ianao. Ireo loharanom-baovao izay maka vaovao avy amin'ny Twitter dia ny Twellow, Klout, TwitterCounter, Twitaholic, ary Favstar.
Raha mbola tsy manana kaonty any amin'ny loharanom-baovao ianao, manangana ny mombamomba anao ao amin'ny Twitter na manova azy mba hampidirana rohy amin'ny tranokalanao ao amin'ny sehatry ny tranokala sy ny bio. Ankoatra izany, mangataha ny mpanjifanao manao toy izany.
Misy lafiny maro tokony hotadidinao ao an-tsaina ny fanorenana rohy ao amin'ny Twitter. Voalohany indrindra, ny habetsahan'ny rohy azonao azonao amin'ity sehatra sosialy ity dia nofolo. Midika izany fa tsy mandalo fifamoivoizana amin'ny tranokalanao izy ireo. Na izany aza, ny rohy nofollow avy amin'ny tranokalan'ny PR dia mbola manan-danja lehibe ho an'ny tranokalanao ary maneho ny motera fikarohana izay mendrika ny sehatra ambony indrindra amin'ny pejin'ny valin'ny fikarohana. Zavatra iray tokony ho fantatrao momba ny fanorenana rohy ao amin'ny Twitter dia ny hoe ny rohy rehetra eto dia tahaka ny URL sasantsasany manohitra ny rohy miaraka amin'ny lahatsoratra fanentanana tenimiafina. Izany no antony ilainao mba hahazoana antoka fa azo vakina, mazava sy azo hatsaraina ny URL.
Ny fizotry ny famoronana rohy ao amin'ny Twitter dia ireto manaraka ireto:
Midira ao amin'ny kaontinao Twitter ary tsidiho ny rohy
Azonao ampiasaina lahatsoratra an-jatony ary mampiavaka, fa tsy rohy fotsiny. Raha vantany vao navoaka ny sioka navoakanao dia ho azon'ireo mpanaraka anao ity vaovao ity.
Hanampy tenifototra mialoha ny teny fototra
Zava-dehibe ny fampiasana tenifototra mialoha ny teny filamatra manan-danja sy be dia be izay tianao Raiso amin'ny SERP rehefa mitady ny tenenan'ny Twitter ny tenifototra. Etsy ankilany, azonao ampiasaina koa ny rohy misy anao.
Ampifanaraho amin'ny mpanaraka anao ny siokanao
Ny bitsinareo dia tokony hitazona, hafahafa ary hanakorontana mihitsy aza mba hampiasain'ireo mpampiasa azy amin'ny alàlany. Raha mahatsapa tsy fahampian'ny talenta ianao amin'ny teknika fanoratana, dia mangataha fotsiny ireo mpanaraka anao mba hamerina ny rohy ao amin'ny sioka voalohany.
Mankany amin'ny TweetMeme
TweetMeme dia loharanon'ny tranonkala izay mikaroka sy manoratra ireo bitsika mahaliana indrindra. Noho izany ny tanjonao voalohany dia ny hiseho ao amin'ity tranonkala ity, ka mamorona bitsika azo tsidihana Source .